လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ယဉ်ကျေးမှု – Teashop ရိုးရာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ယဉ်ကျေးမှု – Teashop ရိုးရာ
လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ယဉ်ကျေးမှု – Teashop ရိုးရာ
Posted by ဇီဇီ on Jul 8, 2014 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes, Society & Lifestyle | 102 comments
ခေါင်းစဉ်က ဘယ်သူပေးဖူးလဲတော့ မသိ။
ဆရာမင်းလူလည်း ရေးဖူးပါရဲ့။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တာကို အပြစ်မပြောဖို့ ဝတ္ထုလို ဆောင်းပါးလိုမျိုးလေးးး။
အရင်ကတော့ နှိုင်းယှဉ်စရာ သိပ်မရှိလို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင် ကို ဝေလေလေမှတ်ပြီး အပြောခံရတာ….။
ခုများတော့ အရက် ဘီယာဆိုင်က ရှောင်မလွတ်တာနဲ့ပဲ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေး ထိုင်တာကို မပြောသာတော့…..။
ကျနော့ အကျင့်က လည်း လက်ဖက်ရည်ကို ဆိုင်မှာ ထိုင်သောက်ရမှ….။
ထိုင်တာတောင် ခုံပုလေးတွေနဲ့မှ ထိုင်သောက်ချင်တာ……။
ပလက်ဖောင်း မညီမညာမှာ ခုံပုပု ခနော်နီ ခနော်နဲ့လေးတွေနဲ့ ထိုင် စကားပြော…။
လမ်းမှာ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်…
လက်ဖက်ရည်ကုန်သွားရင် (အဲ ကျနော်က နောက်တစ်ခွက် ထပ်မှာတယ်၊ ဟိ)
အဲဒီ ခွက်ကုန်သွားမှ……. ကုန်သွားတဲ့ ခွက်ထဲ ရေနွေးအကြမ်း ထည့် ကျင်းးးး …. မသွန်ပါဘူးးးး ……ဆက်သောက်တယ်။
ကိုယ့်ခွက်နဲ့ ကိုယ်သောက်တာကို တစ်ချို့ တွေက နှာခေါင်းရှုံ့ကြသေးးးး။
ပြီးရင် ရှိတဲ့ မုန့်လေး ဟိုမှာ ဒီမှာ ပေါ့လေ…..။
နောက်ပိုင်းတော့ မန်းလေးမယ် အစုံရ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေ ပေါ်လာတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်တို့ အကြိုက်ပေါ့။
အစက မန်းလေးမယ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် သီးသန့်လေးတုန်းက မိန်းကလေး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တာ အတော်ရှားသဗျ။
ရှေ့ကဖြတ်သွားရင်တောင် ခြေလှမ်းမှားတဲ့ ခေတ်ဆိုတော့……..။
ခုတော့ မိန်းကလေး ဘီယာဆိုင် ထိုင်တာတောင် ရိုးသွားတဲ့ ခေတ်မှာပြောရင်တော့ ယုံတမ်းစကားပေါ့ဗျာ။
မုန့်မျိုးစုံရတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေ အရှိုရှိုပေါ်လာပြီး နောက်မှာ အရွယ်မရွေးးး လူတန်းစားမရွေးး နောက်ပြီး အချိန်မရွေးးး လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ဖြစ်တယ်ခေါ်မပေါ့။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ခါ စ ဘာ လက်ဖက်ရည်မှာ ရမှန်းမသိခင်များဆို…. သူများ မှာတာ နားထောင်ရတယ်။
ချိုပေါ့ဖန်ပေါ့ ဆိမ့် ( ပေါ့ဆိမ့်)
ဖန်ပေါ့ စသည်ဖြင့် ပေါ့ (ကျန်ဦးမယ်။ မှတ်မိသလောက် ရေးတာ။ ထပ်ဖြည့်ပေးဦး)
တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး စမ်းကြည့်ခဲ့ရတာဗျ။
အဲထဲကမှ ကိုယ်ကြိုက်တာ ဘယ် အရသာ ဆိုတာ မှတ်ထားပြီး မှာရတာ။
အဲ !!! တစ်ခုပဲ သဘောမကျတာ။
လက်ဖက်ရည် ခွက်လေးတွေ သေးသွား တာ တစ်ခုပဲ။
ပြောပါတယ်။ တစ်ခွက်နဲ့ မဝ ပါဘူးဆို။
နောက်ပြီး လက်ဖက်ရည် ဖျော်နေတာကို မြင်ရတဲ့ ဆိုင်မျိုးကို သဘောကျတယ်။
အဲဒီ ကနေ ဖျော်နေတုန်း ထွက်လာတဲ့ လက်ဖက်အချိုခြောက်နံ့ ကို လွမ်းတယ်။
သောက်နေတုန်းများ မိုးရွာပြီဆို ဆိုင်ထဲပြေးဝင်ပြီး တွေ့တဲ့နေရာ ဆက်ထိုင်ပြီး သောက်ရတာကို ကြိုက်တယ်။
ဒီမှာ အစားအသောက် အစုံရတယ် ဆိုပေမဲ့လည်း ဒီ အခြေအနေမျိုးတွေ မရလို့လားတော့မသိ။
မိုးမလုံ လေမလုံ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ယဉ်ကျေးမှု ကို မှန်ခန်း ကော်ဖီဆိုင် ယဉ်ကျေးမှု ထက် ပိုနှစ်သက်မိတာ ဘာလို့တုန်းမသိ။
အမှန်တော့ ဒီ ကဗျာလေးကို ဖတ်ပြီး လွမ်းသွားလို့။
အတူတူ စိတ်တူကိုယ်တူ လိုက်ထိုင်ပြီး စကားပြောနိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရယ် ကို လွမ်းတယ်။
ဈေးချိုတော်သား နန်းရှေ့ဖွားလို့ ဘဲဆိုဆို….
ဇာတိသား၊ ပ၀တ္တိသား ခွဲခြားစရာမလို….
မန်းသူနဲ့ မန်းသား၊ မန်းမျိုးမန်းရိုးမှန်ရင်….
တနေ့ သုံးခေါက် လက်ဖက်ရည်သောက်….
အဖိုးက ဂုံးပိုးလို့ ခေါ်ဘူးတဲ့….
၆၂ လမ်းပေါ်က ဒိပ်….
ရှိန်ကြီး နဲ့ မင်းမင်းကျော်….
ယူနီစံ နဲ့ မင်းသီဟ….
တော်အိလျှော်အိ မမှတ်နဲ့ ….
မွှေးတပျံ့ ပျံ့ …အချိုခြောက်နံ့ ….
သင်းတဖန့် ဖန့် …အကြမ်းခြောက်နံ့ ….
မန္တလေးတပြခေါ်………. ။ ။
အလွမ်း ကဲ တဲ့ ကျနော့ စိတ်ကိုပို လွမ်းအောင် လုပ်တာ ဒီ ကဗျာ ပေါ့။
ပြန်လာ နော် ဆာဆာ။
အရင်က မန္တလေးကို ပြန်လွမ်းရတဲ့အဖြစ်။
အရင်ကလို လ္ဘက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ ကက်ဆက်သီချင်း
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ကက်ဆက်နဲ့ သီချင်းတွေ ဖွင့်တဲ့ အချိန်တွေတုန်း က မထိုင်ဖူးဘူးဗျ။
မုန့် အစုံရတဲ့ အချိန်မှ စ ထိုင်ဖူးတယ်….
တခါတလေ အဆောင်တွေရှေ့ (81-34)လမ်းဘက်
အဆောင်ကကျလာတဲ့ လ္ဘက်သုပ် ကို
မိုးအလင်း ဖွင့်တဲ့လမ်းဘေး လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ဝမ်းသာအားရ စားကြ
အဖွဲ့ထဲ က သူငယ်ချင်းတွေ အဆောင်မှာ သွား သီချင်းဆိုရင် နီးရာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကနေ စောင့်ခဲ့ဖူးသတော့။
ညပိုင်းဆို မလိုင်များများ နို့နဲ့ဖျော်ထားတဲ့ လက်ဖက်ရည်လေးနဲ့ နံထောလေးးးး
ဒါမိုးကတော့ ..ဘယ်နေလိမ့်မလဲ …ပြင်ဦးလွင်က စိုးစံလမ်းကြားကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးမှာ ထိုင်…ကောင်တာက ဆိုင်ရှင် တရုတ်မလေး ( အဲ့တုန်းက သူက 14 နှစ်ပဲရှိသေးတယ် လူကြီးက အယ်ကြီး ..) အဟိဟိ….ကိုငမ်း…ဆေးပေါ့လိပ်ကြီးဖွာ…ပေါ့ဆိမ့်လေးသောက်….စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်းလေးနားထောင်…စိတ်တူကိုယ်တူသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ငယ်ကျိုးငယ်နာဖော်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးတွေကို အဖြူရောင်အချိန်တွေကို….လွမ်းလိုက်တာဗျာ…အခုချိန်များကတော့..တမင်လုပ်ယူထားတဲ့ ရုပ်တည်ကြီးတွေနဲ့ … စိတ်တူကိုယ်တူရှားသွားတဲ့အချိန်မှာ …အတုတွေကြားနေလာရတာများလာတော့ …မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားတဲ့ဘ၀မှာပျော်လာတယ်…မမရယ်…
ဒီ မှာ ဘယ် လက်ဖက်ရည် ကောင်းတယ် ပြောပြော
ဟိုးးး အရင်က ချက် နို့ဆီ နဲ့ ဖျော်တဲ့ လက်ဖက်ရည် အရသာ ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
လှည်းတန်း စေတနာရှင် ( အပြင်ဦးချစ်ဆိုင် ) ကိုလွမ်းတယ် ၊
လှည်းတန်းဈေးလာတဲ့ သီရိဆောင်က ဥပဒေကျောင်းသူလေး စိုးကို လွမ်းတယ် ၊
လွမ်းသွားပြီ ၊ လွမ်းသွားပြီ ၊ လွမ်းသွားပြီ ၊
အလုပ်ဆက်လုပ်လို့ မရတော့ဘူး ၊ တရားခံက ကေဇီ
သူရို့ လွမ်းတာ က ဆိုင်ကို ကျော်ကျော်ပြီး ဘယ်လွမ်းမှန်းမသိ။
အယ်လ်အေမှာ.. နယူးယောက်မှာ.. ဆန်ဖရန်မှာ.. ဥရောပဆိုင်တချို့က.. စတားဘတ်ဆိုင်တချို့က.. ပလက်ဖောင်းဖက်ကျွံထွက်နေတာတွေ.. တော်တော်ရှိသဗျ..။
ပလက်ဖောင်းပေါ်.. အကာလေးလုပ်.. ခုံတွေနဲ့ထိုင်ကြတာကိုပြောတာပါ…။
အဲဒီမှာထိုင်ပြီး.. လမ်းသွားလမ်းလာတွေငေးရတာ.. အရသာ..။
ညည… ရန်ကုန်တရုတ်တန်းဖက်က.. ခွေးခြေပုလေးမှာ ..
ညသန်းခေါင်အထိ ထိုင်ခဲ့တဲ့လဖက်ရည်ဆိုင်တွေကို.. လွမ်းတယ်..။
အဲဒီ တီးရှော့ ရိုးရာ ဆိုတာ ကြိုက်လို့ ခေါင်းစဉ်မှာ ယူသုံးလိုက်ပြီ။
အဲလို သုံးပေးတဲ့ အတွက် လက်ဖက်ရည်ဖိုးလေး မစပါဦးးး
ရူယို နဲ့ ပေးရမှာနော်။
၁၉၈၈ / ၁၉၈၉ အရေးတော်ပုံပြီးစ…
လူတွေလည်း အလုပ်မရှိတော့ လက်ဘက်သုပ် ဂျင်းသုပ် ဆိုင်တွေဖွင့်…
လမ်းဘေးတွေမှာလည်း လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွေမှို လိုပေါက်တဲ့ အချိန်တုန်းက…
နိုင်ငံနဲ့အဝှမ်း ကျောင်းတွေပိတ်လို့ ကျောက်စ်တို့လည်း ညနေစောင်းရင်…
လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင် ၊ ကျဆိမ့်လေး သုခိတာလေးနဲ့ သက်ဝင်ပန်းချီတွေကို ငေးရင်းပေါ့…
မယုံမရှိနဲ့ ကဗျာချိုချို … ချစ်သဝဏ်လွှာအနုအရွတွေ အဲသည့်က မြစ်ဖျားခံတယ်လေ…
အခုတော့ ဗျစ်ဆိုင် ကဇော်ခန်း ကာရာအိုကေယဉ်ကျေးမှုတဲ့… စာရိုင်းတွေထွက်တာ ဆန်းသလား…
ခုလို မုန့်မျိုးစုံနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေ မလာခင် က …..
အထမ်းသယ်တွေ တွန်းလှည်းသည်တွေက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နား လာဖွင့်တယ်လေ။
ဒါမှမဟုတ်လည်း နီးရာ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်လိုမျိုးက နေ လှမ်းမှာလည်း ရတယ်။
ဘူးနို့ဆီတွေ ပေါ်လာတော့ တစ်ချို့ ဆိုင်တွေက တာပေါင်း လက်ဖက်ရည်ကို နို့ဆီခွက် ကြိုးသီလေးတွေနဲ့ ပေးတာ မြင်ဖူးတယ်။
နောက် ကိုယ်လိုက်ချင်တဲ့ ကောင်မလေးကို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က စောင့်ပြီး လိုက်ခဲ့ကြတာ တစ်ခေတ်ပေါ့လေ။
စာရိုင်းထွက်လာတာက လူတွေရဲ့ နှလုံးသားတွေ ရိုင်းလာတာလည်း ပါတယ် ထင်ပါရဲ့ ကျောက်ရယ်။
လဖက်ရည်တစ်ခွက် ရူဘီတလိပ်နဲ့ အတွေးပွားရတာလေးကတော့..တကယ့်အရသာပဲ…..
ဒါနဲ့ လဖက်ရည်နှစ်ခွက်..ပြီးတော့ရေနွေးပါကျင်းသောက်သေး..ဆိုတော့ မလွန်ဘူးလားကွယ်….
ဒါတောင် စားတဲ့ မုန့်တွေ မပြောသေးဘူးးး
နို့ မို့ ရန်ကုန်လာရင် ဘယ်သူမှ အနော့ ကို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တောင် ခေါ်မှာ မဟုတ်ဝူးးး
နာ ဆို ဘတ်ချလာ နိုက် (အဲလေ)
ဘတ်ချလာ ရ (ဟုတ်ပေါင်)
ဘီအီး (ဟို အရည် မဟုတ်ဝူးနော်) ပြီးမှ ထိုင်ဖူးတာ။
ငယ်ကတည်းက လူကြီးတွေနဲ့ လိုက်လိုက် ထိုင်တာဗျ..။ ခြောက်နှစ် ခုနစ်နှစ်လောက်ကျ
တော့ အိမ်က ချိုင့်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ လက်ဘက်ရည် သွားဝယ်ခိုင်းတယ်။ အဲဒီတုန်းက
ဘယ်လောက်လဲ မမှတ်မိတော့ဘူး။ တစ်ကျပ် နှစ်ကျပ်ပဲ ဖြစ်မှာ။ ကိုယ့်ဘာသာ ဆိုင်
ထိုင်တတ်တဲ့ အချိန်ကျတော့ ရိုးရိုးတစ်ခွက် ၁၀၊ ၁၂ ကျပ်၊ ရှယ်ဆို ဆယ့်ငါးကျပ်
လောက်ဖြစ်နေပြီ။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကို ညတိုင်းလိုလိုကို ထိုင်ဖြစ်တာ။ စာကျက်
တာတောင် ဆိုင်သွားပြီး ကျက်တဲ့ အထိပဲ။ ဘီအီး ပြီးတော့ ဘီယာ ဖြစ်သွားရော..ဟိ။
လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တဲ့ အကြိမ် နည်းသွားသပေါ့လေ။
ချိုင်ဆွဲ လက်ဖက်ရည် လို့ ခေါ်တာ။
ကော်ဖီဝယ် ဆို ဓာတ်ဘူး ယူသွားရတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ ဗဒင်သီချင်းခွေက မဝယ်ရပဲ အိမ်နားက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က ဖွင့်တာနဲ့ အကုန်အလွတ်ရတယ်။
မထိုင်ဖူးပဲ အိမ်က ကြားနေရတာ။
လှိုင် နဲ့ အမက ဘီအီး အမျိုးတွေ ပေါ့နော်။
အောင်မလေးဗျ..။ ကျုပ်က.. လူကြီးဖြစ်နေသဗျ..။
အထု ဆို တမဒဂျီး ကောင်းမှုနဲ့
လက်ဖက်ရည်ဖိုးက ၃ သိန်းတောင် ဖစ်နေမင့်ဟာ။
တဂျီး အဖိုးဂျီး ဖစ်ပြီ။
သဂျီးရယ် ကျွန်တော်က အငယ်ကလေး ရှိသေးတာကို…ဟိဟိ
သဂျီးတို့ခေတ်နဲ့ ဘယ်တူပါ့မလဲ။ ကျွန်တော် တက္ကသိုလ်တက်တော့
လက်ဘက်ရည်ရိုးရိုး တစ်ခွက် ဆယ့်ငါးကျပ်လောက် ဖြစ်နေပြီ။
(၂၀၀၀-၂၀၀၁)(စည်ဘီယာက လေးဆယ့်ငါးကျပ်လား မသိဘူး)
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တဲ့ အရသာတော့ မသိဘူး..ကဖေးမင်းသားဖျော်နေတာ စိတ်ဝင်စားလို့ အနားသွားစပ်စုတာ..မင်းသားက ပညာခန်းပြရင်း ရှိတ်ရင်း နို့ဆီ၊နို့စိမ်းတွေ အခါးရည်တွေ ပိုပိုသာသာထည့်လိုက်တာ ၂ခွက် ၀ယ်တာ..တစ်ကျိုက် နှစ်ကျိုက် တိုင်ကီဆိုက်…၄ခွက်စာလောက် ရလာတယ်..ပြီးတော့ အိတ်စပရက်စ်ပေါ်မှာ ငြိမ့်လို့..
ဘယ်နားမှာလဲ။ မော်လမြိုင်သွားတဲ့ လမ်းမှာလားးး
ရှမ်းပြည်ဘက် ဘုရားဖူး ခရီးသွားရင်း…မော်မြိုင်ဘူး..တူအမြဲပါနေတယ်
ခိခိ။ သိပြီ။ သိပြီ။
ကျုပ်အစိုးရအလုပ်စလုပ်နေတုန်းကပေါ့..လစာက 385 ကျပ်ရယ်ပါ…
ဘာဖြစ်ဖြစ် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တော့ ထိုင်ခဲ့ကြတာပဲ….ညဆို ဆိုင်ပိတ်တဲ့အထိ ထိုင်ပြီး လေပစ်ကြတာ..
၈၉ ဆိုတော့ အနော် ၈ နှစ် သမီးပေါ့။
အဲဒီတုန်း က ဒိုင်ယာရီဟောင်း ခုထိရှိသေးတယ်??
ဂီတနဲ့ နွယ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေ ရှိတယ်ဗျ
အဲဒီဆိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကြီး ယူအက်စ်..တနေရာရာမှာရှိတာ.. သိတဲ့သူ.. လက်ညိုးထောင်..
အင်တာဗျုးချင်လို့..။ (၂နှစ်မြောက် အမှတ်တရ)
၂ ယောက်လုံး ပြန်လာပြီး ရှင်းပြကြပါ။
ကြိုနေတယ် ဟိုမှာလေ ခရမ်းပြာ ….
ထာဝစဉ်မေ့မရတော့ပြီ ခရမ်းပြာ ….
ဒါ ခင်မောင်တိုး သီချင်း “ခရမ်းပြာ”
တံတားဖြူ အောက်နားက ခရမ်းပြာလက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကို ဆိုထားတာ လို့ ကြားဘူးတာဘဲ။
သူရို့ ပြောနေတာ ဝုတ်မဝုတ်တော့ မသိ။
အင်းယားဘေးက ခရမ်းပြာလဖက်ရည်ဆိုင်အကြောင်းပြောမယ်ထင်လို့.. မှန်းပစ်လိုက်တာပါ.. ဇီဇီရေ့..
လ ဘက် ရည် တော့ မ ကြိုက် လို့ရေး တတ် ဘူး
မုန့် ဟင်း ခါး လွမ်း ချင်း ဆို ရင် တော့
ရှေ့ ဆုံး က ပြေး လာ မယ်
နာ့ မွမွပြုံး အတွက် မုန့်ဟင်းခါး အလွမ်း နောက်မှ လာဦးမယ်။
ကျုပ် ရဲ့ အချော်တစ် တူမတော် ကတော့ အစား အသောက် အတွက် ဆို ဘာနဲ့မှမလဲ တဲ့ သဘော ရှိတယ်။
အရီး ရဲ့ မြန်မာပြည် မှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရှည်ကာလတွေထဲ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ဆိုတာ အရီးတို့ ရဲ့ အစည်းအဝေး ထိုင်ရာ နေရာပါ။
ချစ်သော ဘောဇိ က ဒါမျိုး အင်မတန်ကြိုက်။
သူကလဲ ပြောချင်ရာပြော၊ ကိုယ်ကလဲ စားချင်ရာစား။
ရန်ကင်း မှာ တုန်းကဆိုရင် အဲဒီ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် က ကော်ပြန့်ကြော် တအားကို စားလို့ကောင်း။
ဒီတော့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ဆိုတာက အရီးတို့ အလုပ် မှာ မရှိမဖြစ်မိုး ပါဘဲ။
အခုတော့ ဒီလို လုပ်နိုင်ကြတော့မယ် မထင်။
အရီး ကိုလဲ တစ်ခြားသများ တွေ လိုဘဲ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် အကြောင်းပြုပြီး လွမ်းချင်ရာ လွမ်းခွင့်ပြုပါဦး။
ကျောင်းမှာ တုန်းကတော့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်လေ့မရှိဘူး။
ယမ်းဘီလူး အအေးဆိုင် မှာဘဲ ထိုင်ပြီး တစ်ခြားစားချင်ရာ မှာစားရင်စား၊ ထမင်းဘူးဖွင့်စားရင်စား ပေါ့။
အရီး အကြိုက်ကတော့ သံပုရာရည်ချဉ်ငံငံ၊ ထောပတ်သီးလက်ဖျော်၊ ရေခဲသုတ် ပါ။
အနားက ဒေါ်ချို ဆီချက်၊ တရုတ်မ မြီးရှည်၊ ဦးလှ ထမင်းကြော်။
ယမ်းဘီလူး က ကိုထွန်းမောင် တို့ ညီအစ်ကို တွေနဲ့ အင်မတန် ရင်းနှီးနေအောင်ကို ဒီလောက် ကျောင်းသက်ရှည် ခဲ့တာကိုး။
အခုလဲ အိမ်ပြန်တိုင်း ကျောင်းထဲရောက်တယ်။
သူတို့ ကလဲ ကိုယ့်ကို နာမည်နဲ့ကို တွဲပြီး အခုထိ မှတ်မိနေတုန်းဘဲ။
အင်း အသက်ဘယ်လောက် ကြီးလာ ကြီးလာ ကျောင်းတုန်းက ကိုယ့်အရိပ်တွေ ကို အမြဲလွမ်းနေဆဲ။
အနော့ အရီး က အင်္ဂါနေ့ည လာတတ်တယ်ဆိုတာ။
ဒါတောင် အပြောခံရမစိုးလို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် မုန့်တွေ လွမ်းကြောင်း မရေးဘူးးး
ဘယ်လောက်လွမ်းလွမ်း ကျောင်းတုန်း က အရိပ်တွေက ပြန်မရတော့သလို
ပြန်မရတော့လို့ပဲ မဆုံးအောင် လွမ်းမိသလားမသိဘူး အရီးးးး
ကျနော့ စိတ် အခံ က လွမ်းတတ်တယ်။
ဗေတား အတိတ်တွေမှာ..လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ဆိုတာ..မပါမဖြစ် ဇာတ်ပို့ နေရာတစ်ခုပါ…
၄နှစ်သားလောက်ကတည်းက အဖိုးနဲ့ ရုံးကန်တီး ကိုလိုက်သွားနေတတ်ပြီ..အဲဒီတုန်းက သံမတ်ခွက် အစိမ်းရောင်ကြီးတွေ နဲ့ များများကြီးသောက်ရတဲ့ အချိန်..ကော်ဖီက နေမကောင်းရင်တိုက်ကြလွန်းလို့ လူမမာစာ ဆိုပြီး..မကြိုက်တတ်သေး..
လဘက်ရည်ဝယ်ဖို့ချိုင့်လုံးလေးတွေ အိမ်တိုင်းလောက်နီးပါးရှိကြမယ်ထင်ပါတယ်…..အဲဒီအချိန်လောက်က မုန့်ဟင်းခါးကို လည်းဖက်ရွက်နဲ့ထုပ်ပြီးဟင်းရည်ကို ချိုင့်နဲ့ထည့်ပေးတာ…အစတော့လူကြီးပါမှ သွားရတယ် လိုက်ရတယ်..
အဲဒီတာ ဝန်ကိုဗေတားအ၇မ်းသဘောကျတာပေါ့…အပြင်ထွက်ရတဲ့ အပြင်..လဘက်ရည်ဆိုက်မှာလည်းငေးလို့ရတယ်…
နို့ဆီ ကိုဆီမှုတ်လိုမျိုးလေးနဲ့ ကလောက် ကလောက် ဆိုပြီး ဟန်နဲ့ထည့်တာ..သကြားကိုဇွန်းနည့်ဝေးဝေးကနေပက်ထည့်.ပြီးရင်ရေနွေးအိုး ထဲက အကျရည် ကိုထည့် ပြီးမှလူကိုပါ ဘယ်ညာယိမ်းပြီး ခပ်မြင့်မြင့် ကနေ အပြန်ပြန်လောင်းပြီးဖျော်ပေးတာကိုကြည့်ရတာ အတော်သဘောကျခဲ့တာ..
နောက် နံပြားရိုက်တာ..အီကြာကွေး လုပ်တာ စမူစာ လုပ်တာတွေကိုတမေ့တမောငေးပြီးမှပြန်တယ်..အိမ်ေ၇ာက်တော့ လဘက်ရည်ကအေးတောင်နေပြီ..တစ်ခါတစ်လေ..ဧည့်သည်ပြန်သွားလို့..မတိုက်လိုက်ရဘူးးခိခိ..
လူကြီးတွေနဲ့ ရောယောင်လိုက်သွားပြီး..ပေါက်စီတို့ စမူစာတို့ ကော်ပြန့်စိမ်းတို့ လိုက်အုပ်တာ..သူတို့စကားကောင်းနေတုန်း အလစ်မှာ…သုံးလေးခုလောက်တွယ်ပြီး ငြိမ်နေလိုက်တာ…ရှင်းခါနီးဆို မယောင်မလယ်နဲ့ ခပ်ဝေးဝေးသွား နေတယ်..
၈တန်းလောက်ရောက်တော့..ကိုယ့်ဖာသာထိုင်တတ်နေပြီ..ဖိုးချို ရှိုင်းအောင် ခိုင်ထူး ဆိုင်းထီးဆိုင် အက်စ်ကဲနက် တူးတူး သူတို့တွေနဲ့..အတူထိုင်တတ်နေပြီ..ဒါပေမယ့် အိမ်ကမိဘတွေကမကြိုက်ဘူး လစ်မှထိုင်ရတယ်.အဲဒီတုန်းကတော့..ချိစိမ့် ချိုကျ ချိုပေါ့ကျ အဲဒိလောက်ပဲရှိသေးတာ..သောက်တတ်တာကတော့ချိုစိမ့် အဆင့်ပေါ့..
ကိုးတန်းမှာ မင်းဘူးကိုပြောင်းပြီး ကျောင်းသွားနေရတော့ကြောက်ရမယ့်သူမရှိ မိုးချုပ်ညဉ့်နက် အကြိုက်ထိုင်တော့တာ..
အဲသူတို့ ဖက်ကအခေါ်တွေကတော့ တစ်မျိုး..ချိုဖန်..ချိုပြင်း..ပဒေါင်း တဲ့.. ချစ်ကောင်းရဲ့ကော်ဖီခါးခါးနဲ့ စိုင်းထီးဆိုင် အောင်သူ မင်းအောင် အနိုင်တို့ နဲ့ တစ်လှည်ှုစီ ထိုင်ခဲ့တာပေါ့..စာမေးပွဲပါကျရော.. အဲဒီတုန်းက နို့ပျက် လို့ခေါ်တဲ့ နို့များများ နဲ့သောက်တယ်…လဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်ပျက်စီးနေပြိလို့ လူကြီးတွေ ကယုံကြည် နေကြတဲ့ အချိန်ပေါ့..
ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ မိမနိုင်ဖမနိုင်စဖြစ် ပြီ..ညလုံးပေါက်တွေဘာတွေ ထိုင်တော့တာ..စိုးလွင်လွင်..ထူးအိမ်သင် မွန်းအောင် တို့နဲ့ ညတိုင်းလောက်နီးပါးတွေ့နေတတ်ပြီ..သောက်တာကလည်း ချိုပေါ့ အဆင့်ရောက်ပြီပေါ့..ပုဏားဆိုတာပေါ်လာတယ်.
ရိုးရိုး ..ရှယ် စသိတာ အဲလောက်ကလားမသိဘူး.
၁၀တန်းရောက်တော့ မနက်ကျူရှင်ပြေး နေ့လည် ကျောင်းပြေး ည မိုးစုပ်စုပ်ချုပ်တဲ့ အထိ တနေ့လုံး ထိုင်ပြီ…အကာကျက်တို့ ပိုးသေတို့ အဲဒီမှာ စသိတာ..ဇော်ဝင်းထွဋ် နဲ့ အထိုင်များတဲ့ အချိန်..သောက်တာက ချိုကျ..
တိုင်ကီ ဆိုပြီး နာမည် အသစ်ထွက်တယ် ခွက်တွေလည်းသေးသွားတယ်..
အရေး အခင်းဖြစ်တာ မှာ ဆိုင်တွေ အလျှိုလျှိုပေါ်လာပြီး လူကြိးတွေကပါ လဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တာကို..လက်ခံလာကြပါဘီ
ဆိုင်သောက်ပါဆယ်..ရိုးရိုးပါဆယ် ခေတ်စားလာတယ်..ပေါ့စိမ့်တို့ ကျစိမ့်တို့ နာမည် အသစ်ကလေးတွေ ရလာတဲ့အချိနပေါ့..
နောက် တက္ကသိုလ်တက် အလုပ်ဝင်..ခုထိ လ ဘက်ရည်ဆိုင် ထိုင်တတ်တုန်း..လ ဘက်ရည်ကြိုက်တုန်း…သောက်တာက ကျစိမ့်။
တူးစရာဆိုလို့ ဒီ လွမ်းစရာ အတိတ်လေးတွေပဲ ရှိတာ။
ကျန်တာတွေ လာဖော်ကြတာတော့ ကိုယ့်ဒေါသနဲ့ကိုယ်။
ဆွေ တို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် သမိုင်းစတော့ သများကို မမွေးသေးဘူးးး
တော်တော် နှံ့နှံ့စပ်စပ်သေသေချာချာကို လွမ်းထားတာပဲ။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင် အကြောင်းလည်း နောကျေတယ်နော်။
စာရိုက်ပျင်းပြီး ကော်မန့်ပေးခဲတဲ့သူဆီက ရတဲ့ ကော်မန့် အရှည်ကြီးမို့ စိမ်းထားတယ်။
သူများတွေ လွမ်းသလို လွမ်းတာ တစ်ခုတစ်လေမှ မပါဘူး ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးးးးး
မြန်မာ့ အသံ နားက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အစိမ်းဝမ်းဆက်လေးကို စောင့်ရတာတို့ ဘာတို့။
ကလေးမြို့လေးမှာ ရှိချိန် အဖေရယ်ညီမရယ်က ဆိုင်ကယ်တစ်စီး ကောင်းကင်ပြာဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ ညဘက်လမ်းမီးမှိန်မှိန်အောက်မှာ.. ဇော်ပိုင်ရဲ့ မြို့အ၀င်ညကို အသံဗြဲတွေနဲ့အော်ပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ချီတက်ခဲ့တဲ့ချိန်တွေ သတိရသား….
ရန်ကုန်အိမ်မှာ လူရှုပ်တဲ့အချိန်…အစ်မတွေနဲ့စတေးရှောင်ရင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင် သီချင်းနားထောင်ပြီး အချိန်ဖြုန်းခဲ့တာတွေလဲ ခု သတိရနေတယ်….။
ခု မြင်မြင်နေရတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးတွေက အရင်လို မရိုးသားတော့သလိုပဲ………
လက်ဖက်ရည်ဆိုတာကို YIT ကျောင်းဝင်းထဲက ကန်တင်းဆိုင်တွေမှာပဲ သောက်ခဲ့ဖူးတာ … ကျောင်းခန်းထဲမသွားပဲ တစ်နေကုန် ထိုင်ပြီး လေဖေါခဲ့ကြတာကို လွမ်းမိတယ် ..
မေတ္တာပေါင်းကူးတဲ့ .. ဆိုင်နံမည်က ကောင်းသလောက် အလုပ်မဖြစ်ခဲ့တာတော့ ရင်နာမိသား ..
အတူထိုင်လေပေါခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ကလေးတစ်ဒါဇင်လောက်များ ရနေကြပြီလား ..
ကျနော့ကိုဆို ကင်တင်းမှာ အရင်ရှာရတယ်။
ကလေး ၁ ဒါဇင်ရှင်တွေတော့ မလွမ်းနဲ့နော် ဝေ လေးးး။
ခု ကိုယ့်ဘွက အေးချမ်းပြီး သွားချင်ရာသွားလို့ ရနေတာ။
Face Book က friend တယောက်စကားနဲ့ပြောမယ်
နာက လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ခွေဇီ၊ လက်ဘက်ရည်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အိမ်ကို ပါဆယ်ဆွဲလာရင် အရသာရှိတယ် မထင်တော့ဝူး၊ Weekend ဆို လက်ဘက်ရည်၊ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ပြီးရင် ပဲနံ ဒါမှမဟုတ် ဟီးးးး အကြည်ညိုပျက်မှာစိုးလို့ စားတာတွေ အကုန်မပြောတော့ပါဝူး၊ ချွိပေါသလိုလက်ဘက်ရည်လဲ (၂) ခွက်မှဝတယ်… အုန်းနို့စားလိုက်လက်ဘက်ရည်သောက်လိုက်က တစ်ပွဲမကုန်ခင် လက်ဘက်ရည်ပြောင်ဘီ၊ နောက်တစ်ခွက်မှ အချိုပွဲလေးနဲ့ပါ ဆက်ဆွဲဒါ
စားတဲ့ မုန့်တွေ အကုန်မပြောရဝူးလေ။
လက်ဖက်ရည် ၂ ခွက်ကို လွန်လှပြီ။
အပေါ်မှာ လူပျိုကြီး အကိုညိုဝင်း အဲဂလောက်ကို လန့်နေပြီ။
မိုးမလုံ လေမလုံ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ယဉ်ကျေးမှု ကို မှန်ခန်း ကော်ဖီဆိုင် ယဉ်ကျေးမှု ထက် ပိုနှစ်သက်မိတာ ဘာလို့တုန်းမသိ။ ….
ကန်ရာသီဖွားချင်းမို့ ..တူတယ်ပြောရမလားပဲ.. ။
သင်ပေးတာကတော့… အဟွတ်… ဟိုကောင်မလေး….
ကိုယ် သောက်နေကျ လက်ဖက်ရည် ချိုချိုရဲရဲကြီးကနေ…..
သူ သောက်တဲ့ကျဆိမ့်ကို လိုက်သောက်၇င်းကနေ..အခုဆို…
ကျဆိမ့်မသောက်ရရင်ကို… မနေနိုင်တော့ဘူး ..။
အချိုကြိုက် ဗားဂိုးမို့ ချိုဆိမ့်ကိုပဲ စွဲစွဲမြဲရာက
အဖိုးက ပေါ့ဆိမ့်ကို စမ်းသောက်ခိုင်းရင်း စွဲသွားပါလေရော့လားးး
ဟိုးအရင်က.. ဆိုင်တဆိုင်ဆိုင်ဟာ.. အဲဒီ ချို ကျ ပေါ့ စိမ့် ဖန် ခါး အတွဲတွေကို ဘလက်ဘုတ်နဲ့ရေးပြီး ဆိုင်ရှေ့ထားတာ.. မှတ်မိတယ်..။
ကျုပ်ကတော့.. ကျောင်းသားတုံးက တရက် ၈-၉ခွက်အထိ သောက်ခဲ့သမားမို့.. ပေါ့ကျသမား…။
စင်ကာပူ ဆိုတာ ဘာတုန်းဟင်။ ဂျင်ဂျာ တီး ဖြစ်မယ်ထင်ရရဲ့။
ပုဏ္ဏား တော့ မသိ။
သုံးရောင်ခြယ်က ဘာလဲဟင်? ကော်ဖီ/လက်ဖက်ရည်/နို့ ရောထားတာလားးး
စင်္ကာပူက.. တရုတ်နဲ့ကုလားရောထားတာမျိုး.. လက်ဖက်ရည်နဲ့ကော်ဖီရောတာ…။
ကျောက်ပန်းတောင်းက.. နို့ဆီ၊ သကြား ကို.. ပုံမှန်အတိုင်းပေမယ့် အကျရည် အပြည့်မထည့်လျှော့ချလိုက်သမို့.. နည်းနည်းနဲ့..ချိုချို…။
သုံးရောင်ခြယ်ကတော့.. နိုဆီရယ်..။ အကျရည်ရယ်..နဲ့.. ဖန်ခွက်ထဲ၃ရောင်စပ်ပေါ်နေတာ..။
ဒီမှာ ဒီလောက် ပြောနေတာကို ဟို ချိုပေါ့ကျ လူဂျီး မလာသေးဝူးးး
ပုဏ္ဏား ဆိုတာ နွားနို့ များများနဲ့ ဖျော်တာ ဖြစ်မှာ ပေါ့ သဂျီးရဲ့။
ခုခေတ်တော့ ပိုဆိုး ဘာတွေမှန်း မသိဘူး။ စော်ပြောင်တို့၊
စော်မော်ဒိုး တို့ နားထဲကြားတဲ့အတိုင်း ရေးတာနော်။
စိမ့်ပေါက်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဗျ …နွားနို့ပျစ်ပျစ်ထဲမှာ ကော်ဖီမှုန့်တစ်ဇွန်းထည့်ထားတာမျိုး…. ပြင်ဦးလွင်က နွားနို့စစ်စစ်လေးနဲ့ဆိုတော့ကာ….အဟိဟိ ..လွမ်းတာ ..14နှစ်သမီး…တရုတ်နုထွားမလေးရယ်….ကိုကိုကချင်ကြီးသစ္စာကြီးတယ်တွေ့လား…ခုထိရင်ဘတ်ကြီး က တိုက်ဆိုင်မှုရှိလာရင် … ဖိုးသိုးဖတ်သတ်ဖြစ်နေတုန်း…အဟေးဟေး
ကျနော်ကတော့.. ကျဆိမ့်ကို.. သောက်ရင်… ငုံထားတုန်းက အရသာကိုရော..
မျိုချလိုက်တုန်းက.. စီးဆင်းသွားတဲ့ အရသာကိုရော…
လျှာမှာ..စွဲကျန်ခဲ့တဲ့ .. ခါးသက်သက် အရသာလေးကိုရော…
တစ်ခွက်ဆိုတစ်ခွက်ရဲ့ .. အရသာ အစအဆုံးကို.. ချစ်နေတာ…
ကျဆိမ့် ( သူကြီးက..စိမ့်ကျ တဲ့ ) တစ်ခွက်လုံး အစအဆုံးချစ်တဲ့အထဲမှာ.
ခွက်နှုတ်ခမ်းကို..လာလာနားတဲ့ယင်ကောင်တွေ မပါဘူး ။
သောက်ပြီး.. ညတွေ..အိပ်မပျော်တိုင်း.. စာထရေး….
လက်ဖက်ရည် ပူရင် အဲဒီထဲကိုရော ထည့်သောက်တတ်သေးလားးး
မယုံရင် ဟို ဂလု မှာလည်း မေးကြည့်။
အနော်က ကော်ဖီပိုကြိုက်တယ်.. ဟိ
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို စမှတ်မိတဲ့အရွယ်က လေးတန်းနှစ်။ ကျူရှင်သွားတက်ရင် လမ်းထိပ်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့က အမြဲတမ်းဖြတ်ရတယ်… အဲ့တုန်းက ဖွင့်တဲ့သီချင်းက မျိုးကြီးရဲ့ ဒီကစောင့်နေသူ အခွေ…
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆို ကြောက်တဲ့အထဲမှာပါတယ်… ဖြတ်မလျှောက်ရဲဘူး…. တစ်ယောက်တည်းဆို လုံးဝကို မလျှောက်ရဲတာ.. ဆယ်တန်းဖြေပြီးတဲ့အထိပဲ.. ရန်ကုန်ကို ကျောင်းလာတက်မှ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို မကြောက်တော့တာ… လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကောင်းကောင်းလည်း မထိုင်ဖူးဘူး…
သူ့ကို ခေါ်ပြီး ထိုင်။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ပီသတဲ့ ဆိုင်လေးရွေးထိုင်။
ရှယ် တစ်ခွက် သုံးရာ ကို ဈေးတက်တဲ့ ဆိုင်တွေ တက်ယူကုန်လို့ မကြာမီ မြန်မာပြည်တ၀ှမ်း လဘ္ဘက်ရည် တခွက် သုံးရာဖြစ်တော့မှာပါ …
နောက် အခေါ်အဝေါ် အသစ်တွေ လည်းဆန်းသစ်ထားကြပါကြောင်း …
စွန်ရဲ … (ကျဆိမ့်)
သောက်နေကျ က အဲ့ဒါမို့လို့ အဲ့ဒါဘဲ သိတယ် ..
ခိခိ ပြောရင်းနဲ့ မှ လ္ဘက်ရည် နဲ့ တွဲ တဲ့ ပေါက်စီကို ခိုင်ခင်ဦး တစ်လုံးခေါ်ခဲ့ကြတာ လည်းသတိရမိပါရဲ့ …
နွားနို့ ကို တမဒဂျီး တစ်ခွက်လို့ ခေါ်တာထက်ဆိုးနေပါရောလားးး
အဟိ… ဒါဆို ပေါင်မုန့်တို့ နံပြားတို့ကို ဘယ်လိုခေါ်လဲ မှတ်မိဦးမယ်ထင်ပါတယ်…
လဖက်ရည် ဆိုင် တစ်ခါထိုင် ၂ ခွက်သောက်တဲ့
အဖျော်ဆရာကြီး ဦးဘလက် ရောက်ရှိကြောင်းရယ်ပါ…။
အခုနလေးတင်ကပဲ ကျိုက်ဝိုင်းက3Seasons လဖက်ရည်ဆိုင်မှာ
ပေါ့စိမ့် ၂ ခွက်သောက်ခဲ့တာဗျ…။
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အဆိုတော်ရဲ့ တေးစီးရီးစ် အသစ် ထွက်ရင်
လဖက်ရည်ဆိုင်တွေကလည်း သီချင်းခွေ သစ်ထွက်ရင်
ကိုယ်ပိုင်ဝယ်ပြီး အေဆိုဒ် ဘီဆိုဒ် မနားတမ်း ဖွင့်ပေးတတ်ကြပါတယ်…။
ဆောင်းဘောက်စ် တွေ အပြိုင်အဆိုင်နဲ့ ပေါ့…။
RIT က ဘုန်းမော်တို့ အရေးအခင်းတောင် လဖက်ရည်ဆိုင်မှာ
သီချင်းအပြိုင်ဖွင့်ခိုင်းရာက စခဲ့သလိုလို မဆလ သတင်းစာတွေထဲ
အခုတော့ လဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုတာ လေသေနတ်နဲ့ စစ်တိုက်ချင်သူတွေအတွက်ပဲ
အခုနလေးကပဲ ဦးဘက်နဲ့ ရွာသားတစ်ယောက်
လေသေနတ်ကိုယ်စီနဲ့ အကြီးအကျယ် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့…။
လဖက်ရည်ဆိုင် ယဉ်ကျေးမှုကို လဖက်ရည် ၂ ခွက်သောက်ပြီး
အခု…ဇီဇီ ရဲ့ လဖက်ရည်ဆိုင်ယဉ်ကျေးမှုပို့စ်မှာ
လေသေနတ် နဲ့ ပဲ ကွန်းမန့်ဝင်ရေးနေခဲ့…။
နောက်ခါဆို ထိုင်တိုင်း ……
နောက်တစ်ပတ် လောက်ကို လက်နက်တွေရောက်လောက်ပါပြီ။
ရွာထဲမှာ လက်ဖက်ရည်ကြိုက်တတ်တာ နှစ်ယောက်တွေ့ဖူးသဗျ….ကိုကြီးဇေယျာ နဲ့ ကိုကြီးဆွေ….
လက်ဖက်ရည်တစ်ငုံ ငုံလိုက် …စီးကရက်လေးဖွာလိုက်နဲ့ .လုပ်ပြနေတတ်တာ…..အလိုလိုနေရင်း သူတို့လို သောက်ချင်လာသဗျ….
သူတို့ရဲ့ တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ …ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေပြောပြတတ်တာနဲ့ကတော့ … လက်ဖက်ရည်သောက်တိုင်းသတိရနေရတဲ့ ဆရာနှစ်ပါးဗျ…. လက်ဖက်ရည်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုရင် ..မိတ်ဆွေကောင်းကောင်းလဲ လိုသေးတယ်ဆိုတော့ကာ …ရွာသားများကိုအကြံပေးလိုတာက ရန်ကုန်မှာ…လက်ဖက်ရည်သောက်မယ်ဆိုရင် ..အဲ့ဆရာနှစ်ပါးနဲ့ ဂီဂီကိုပင့်ပါဗျ….
( မှတ်ချက်..ကျပ်တာမဟုတ်..အတည် ..အဟိဟိ )
မောင်ဂီ က လက်ဖက်ရည်သောက်သလားးး
ဟို ၂ ယောက်က တစ်ယောက်က ယောက်ခမွ၊ တစ်ယောက်က ဒက်။
ယောက်ခမွဆို ရေနွေးဓာတ်ဘူးထဲ ရေနွေးမကျန်ရင် စိတ်တိုတတ်တယ်ဆိုလား ဘာလားးး
ဒက် ကတော့ ဆေးလိပ်ဖြတ်မယ်ဆိုလားးးးးးးး လားးးး ဟင်?? မဖြတ်ရသေးဝူးလားးး
လဘက်ရည်ဆိုင် နဲ့ လွမ်းစရာလေး တစ်ခုသတိရလို့ ၀င်ပြောအုံးမယ်။
ကျုပ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်စဉ် မိုးလေးက စွေပြီးတစ်ဖျောက်ဖျောက်နဲ့ ရွာနေတုန်း ကျောင်း Canteen က လဘက်ရည်ဆိုင်မှာ လဘက်ရည်တစ်ခွက်မှာပြီး ဒူးယားစီးကရက်လေးဖွာကာ ဟိုကြည့်ဒီကြည့် ထိုင်နေ တာပေါ့၊ မိုးရွာနေတော့ ကျောင်း Canteen မှာလည်း မိုးခိုရင်း စားသောက်ရင်း ထိုင်နေကြတဲ့သူက ပြည့်လုလုပေါ့ဗျာ၊ အဲဒီအချိန်မှာ ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက် ထီးလေးဆောင်းပြီး ကော်ရစ်တာကနေအပြေးလေး Canteen ကို ကူးလာကာ ကျုပ်ထိုင်နေတဲ့ စာပွဲနားက ခုံလွတ်တစ်ခုမှာ အကိုလူရှိလား လို့မေးတော့ မရှိပါဘူး ဆိုတာနဲ့ ထိုင်ပြီး ဆီချက်တစ်ပွဲ လဘက်ရည်ပေါ့စိမ့် တစ်ခွက်မှာပြီး စားသောက်လေရဲ့၊ ကျုပ်လည်း ကလေးမလေး ရှိနေတော့ အားနာပြီး ဆေးလိပ်ထပ်သောက်ချင်ပေမယ့် နောက်တစ်လိပ်ထပ်မဖွာဖြစ် ရေနွေးကြမ်းဘဲ တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက် ဌဲ့သောက်လိုက် လဘက်ရည်လေး တစ်ငုံသောက်လိုက် လုပ်နေရ တာပေါ့ဗျာ။ အဲ ကလေးမက စားလို့သောက်လို့လည်းပြီးရော ဗိုက်အရမ်းစာနေလို့ အပြေးထွက်လာတာ ဆီချက်နဲ့ လဘက်ရည်မှာပြီးမှ ပိုက်ဆံယူလာဖို့မေ့လာမှန်း သတိထားမိတယ်အကို အဲဒါ အကိုခဏစိုက်ရှင်း ထားပေးပါလား ညီမက Physics ကပါ အတန်းပြန်ပြီး ပိုက်ဆံပြန်ယူကာ ပြန်လာပေးပါ့မယ်နော်ဆိုပြီး ထီးလေးဖွင့်ကာ လာရာလမ်းကို ပြန်ပြေးသွားတယ်လေ။
အဲဒီတော့မှဘဲ ဒူယားစီးကရက် တစ်လိပ်ထပ်ယူပြီး မီးညှိကာ ဖွာရှိုက်လို့ ဆေးလိပ်မီးခိုး ငွေ့ကို သက်ပြင်း ရှည်နဲ့အတူ မှုတ်ထုတ်မိတော့တယ်ဗျာ။
ခဏအကြာဆေးလိပ်လည်းတို လဘက်ရည်လည်းကုန်လို့ မိုးလေးလည်းစဲလေတော့ ကျသင့်ငွေလေးရှင်းပြီး ကျောင်းCanteen လဘက်ရည်ဆိုင်က ထွက်ခဲ့ရတဲ့ လဘက်ရည်နဲ့ ကျောင်း အမှတ်တရ အဖြစ်လေးကို ခုပြန်တွေးရင် လွမ်းသလိုလို။
အာ့ဆို ပိုက်ဆံ ပြန်မရဝူးပေါ့။
အဲဒီအမျိုးသမီးက သများနဲ့ အမျိုးဟုတ်ဝူးနော်။
အောင်မြတ်လေး ကွန်မင့်ဒွေတဘုံဂျီးဘာလား။ မနက်ကတောင် လဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်လာသေး။ ကျဆမ့်လေးနဲ့ပေါ့ကွယ်။ ကြက်ဥပလာတာလေးနဲ့ ခွိခွိခွိ
သများက လိပ်ခုပ်ကို ပိုကြိုက်တယ်။
လက်ဖက်ရည်နဲ့ တွဲပြီး စားချင်တာ။
အလုပ်တွေရှုပ်နေတာရယ် အားတဲ့အချိန်လိုင်းမကောင်းလို့ရွာထဲဝင်မရတာရယ် ဝင်ရပြန်တော့လဲ မျက်စိရှေ့ရောက်တဲ့ပိုစ့်ပဲမြင်ရတာရယ် အစုံပါပဲချွိရယ်။
ချိုပေါ့ကျတစ်ခွက်နဲ့အတူ…မမောတမ်းပြောပြတော့.. ဘာပြန်ပြောလိုက်ရမှန်း…. မသိဘူးကွယ်… :loll:
လက်ဖက်ရည်အရမ်းကြိုက်…ဟိုလိုခုံပုလေးတွေနဲ့တော့မထိုင်ဖူးဘူး… ဖိးလ်တို့ လပ်ကီးဆဲဗင်းတို့မှာထိုင်ရင် အမြဲသောက်တယ်… အိမ်နားကဆိုင်တွေမှာဆိုရင်… ပါဆယ်ပဲသောက်တယ်.. :)) သောက်နေကျက ပုံမှန်.. သူတို့ပြောတဲ့အထဲမပါဘူး… စသောက်တော့ အစ်ကိုတွေမှာပေးတာကိုစွဲနေပီး..ခုထိအဲ့လိုပဲမှာသောက်တယ်… အခုတွေးနေတာ.. တခြားအရသာတွေနဲ့စာရင် ခပ်ဖျင်းဖျင်းဖြစ်နေလားမသိ.. မချိ..မဆိမ့်..မကျ…
သများက ဘာအစားအသောက်မှ ပုံမှန်မစားလို့ လက်ဖက်ရည်လည်း ပုံမှန်မကြိုက်ဘူးးး
ဒါနဲ့ အဲ့ အကို ဆိုတာ ဖြူ့ ကို ပေးမယ် ဆိုတဲ့ အကိုလားဟင်?
ဒါနဲ့ ခွစ်က ယောက်ကျားဒွေဂို စိတ်မ၀င်စားဝူးဒဲ့… နိ ငါ့ဂို အတီမကြံရင် နာရိုးသားတဲ့ ကရင်မလေးဘက် ပြောင်းမာနော်
ဂလိုပါ။ နာ က ဝါး အတွက် အမြဲ အသစ်ရှာရှိ (အဲလေ) သစ္စာရှိပါတယ်။
ခုဟာက ဖြူ့ အတွက် မေးတာ၊
နိတို့ မောင်၂ မ က ကရင်မြင်ရင် ကြံစည်ကြတယ်။
မောင်ဂလေး မတမရွစိက နောက်ကရင်မတြောက်ရဖို့ ကြိုးဇားနေဗြန်ဗီ၊ ခုတင် ဖုန်းနံပါတ် ပေးလိုက်ရတယ်
ပြောလိုက်မှ အတိတ်တောင် လွမ်းသွားတယ်
ဟိုအရင်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ဆိုရင်
မနက် အိပ်ယာနိုးတာနဲ့ ရောက်နေပြီ
နေ့ခင်း ထမင်းစားပြီး ဆိုလည်း ၁ နာရီလောက် ထိုင်တယ်
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က ဖွင့်ထားတဲ့ သီချင်းတွေ နားထောင်ရင်း
ဘော်ဒါအပေါင်းနဲ့ ကမ္ဘာကြီး အကြောင်း လေကြီးလေကျယ် ပစ်ခဲ့ဖူးတာပေါ့ ….
အေးလေ … အဲ့ဒီတုန်းကတော့ဖြင့် …
ငယ်ရွယ်လွတ်လပ်၊ အကန့်အသတ်မဲ့ စိတ်ကူးနဲ့၊ အိပ်မက်ထဲမှာ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းတွေ လွှမ်းမိုးနေတဲ့ အချိန်ကိုး ….
ကျုပ်လည်း လက်ဖက်ရည်ဆို ပေါ့ဆိမ့်ဗျား …
မယုံ ဥဥဆာ ကို မေးကျိ ..
ရန်ကုန်လာရင် တူတူ သွားသောက်ကြမယ်။
ငယ်ငယ်က အနော့ ဒယ်ဒီနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီဆိုရင် အနည်းဆုံး ချိုဆိမ့် တစ်ခွက်နဲ့ ပေါက်စီ 2လုံးစားလိုက်ရမှ အာသာပြေတာ။ ကြီးလာတော့ အခေါ်အဝေါ်တွေလည်း နားလည်လာတဲ့ အခါကျတော့ အမြဲတမ်းသောက်ဖြစ်တာကတော့ ပေါ့ဆိမ့်လေးပဲ။ အခုလို မိုးအေးအေးနဲ့ စာအုပ်က တစ်ဖက်နဲ့ စမူဆာသုပ်တစ်ပွဲနဲ့ဆိုရင် တကယ့်ကို ဇိမ်ပဲဂျာ။
လက်ဖက်ရည် ချစ်သူတွေ အတော်များပါ့လားးး
ကော်ဖီကြိုက်လို့ဆွိရယ်။ တီးရှော့တွေ သိပ်မသွားဖြစ်ဖူး။
ကော်ဖီက မဟာရာဇာ ရေးဖူးတယ်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ အပျိုဂျီး ဒေါ်ကေဇိ အနေဖြင့်
ရွာ ရာအိမ်မှူးရာထူးအတွက် ….
လက်ဖက်ရည်ဆိုင် … လွမ်းချင်းကို …. ရေးပေးနိုင်ရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ဂစ်တာရယ် ခင်မောင်တိုးရယ် မွန်းအောင် ခိုင်ထူးနဲ့ ထူးအိမ်သင်….
ငွေတောင် ဂျိုးသိမ်း စပယ်ရှယ်နဲ့ ဘေစ့်သံများတဲ့
ကိုသန်းနိုင်နဲ့ ရင်ခုန်ယစ်မှူး ရတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရနံ့ မကြာခင် ရေးမည် ………..
အနော် မှာ ပိုင်ရှင်ရှိပါတယ်။ ဟိ။
လူပျိုကြီးတွေကို ဘယ်လိုခေါ်မလဲ ဆိုတော့ လူပျိုကြီးတွေသာမေးကြည့်ပါ။ဟိ။
အကိုအညာသားရဲ့ ပို့(စ) ကို မျှော်လင့် အားပေးပါမည်ဖြစ်ကြောင်းးးး
ပြောရင်း အညာသားကျောကုန်း ဆိုတဲ့ မုန့် စားချင်လာပြီ။ ဟိ
အညာသားကျောကုန်းဆိုတာ မုန့်ကျွဲသဲကို ခေါ်တာကွယ့်
ပြီးတော့ စားဆိုလဲ ……. များများ … စားနိုင်တာလဲမဟုတ်ပဲနဲ့….
ဟား…ဘယ်သူ လက်ဘက်ရည်ဘယ်လောက်စော ကြိုက်ကြ်ိုက်
အာတီဒုံလောက် စောမှာ မဟုတ်။
နယ်က အိမ်ဘေးကပ်ရက်မှာ ကိုယ်မမွေးခင်ကတည်းက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှိတယ်။ (ရဲစည်မေးကြည့်)
အဲဒီ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က ပိုင်ရှင်တွေသာပြောင်းသွားတယ်..ကိုယ့်အိမ်နားမှာတော့ တခါမှ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မျိုးဆက် မပြတ်ခဲ့ဘူး။
ဆိုင်ထိုင်သူတွေက မင်းသမီးအကြောင်းကနေ နိုင်ငံရေးအလယ် အဘိဓမ္မာအဆုံး လေကန်တာတွေ တ၀ကြီး နားထောင်ခဲ့ရတယ်။
အာတီဒုံက လက်ဖက်ရည် အရသာထက် အဲဒီလို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင် လေကန်ရတဲ့ အရသာကို ပိုကြိုက်။
ဒါက ပုံလေးတပုံ..။ ဘယ်နှခုနှစ်လောက်ဖြစ်မလဲမသိ…။
သူကြီး က မမနိုဗွီ ( black white ) ဒါတ်ပုံလေးနဲ့ ပညာလာစမ်းနေတယ်။
မကြာသေးဘူးခင်ဗျ ဆယ်နှစ်ကျော်လောက်ဘဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
လမ်းအကွေးလေးနဲ့ ညောင်မုတ်ဆိတ်က ပုဇွန်တောင်ဘက်ကို ညွှန်းနေသလိုဘဲ။
ဓါတ်တိုင်မှာ ချိတ်ထားတာက ရွှေဧည့်သည် ယာဉ်လိုင်း ရဲ့ လမ်းကြောင်းမြေပုံ။
စားပွဲပေါ်က တစ်ရှူးပေပါလိပ်ထည့်တဲ့ဘူးက ဒီဘက် စစ်အစိုးရခေတ်မှ ပေါ်တာ။
ခုနောက်ပိုင်း လေးထောင့် ဒီဇိုင်းလေးတွေ များလာနေပြီး စီးကလက်ကြော်ညာတွေများနေပြီ။
အယ် ထပ်ကြည့် မိတော့ ခုံလေးတွေ က သံခုံလေးတွေပါလား ဒါဆို ပလပ်စတစ်တွေမပေါသေးခင်မို့ ၁၅ နှစ်ဝန်းကျင်လို့ ပြောရတော့မယ်။
တော်လိုက်တဲ့ နာ့ ဦးးလေးး
ကျနော်ကတော့ ပေါ့ဆိမ်ကြိုက်တာ . . . ဟိုး ကျောင်းသားဘဝက ဟတ်တီးပဲသောက်တယ် ဟဲဟဲ တစ်ခွက်စာ ငွေမရှိလို့လေ . . .
ကျနော်လည်း ခု ပေါ့ဆိမ့်ပဲ တောက်လျှောက် သောက်ဖြစ်တော့တယ်။
၁။ ဖားသား လဖုန်းနဲ့ မျက်​နှာချင်းဆိုင်​က ​အောင်​၀င်း လက်​ဘက်​ရည်​ဆိုင်​နဲ့ ​ရောင်​ပြန်​ လက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်​
၂။ ည​ဈေးတန်း ၇၉ လမ်းက ” ရှိန်​ကြီး ” လက်​ဘက်​ရည်​ဆိုင်​နဲ့ ဘူတာကြီး နဲ့တည့်​တည့်​​လောက်​က ” ဆယ်​သန်း” လက်​ဘက်​ရည်​ဆိုင်​
၃။ ၃၅ လမ်း ၈၀× ၈၁ လမ်းကြားက ညဇီးကွက်​ လက်​ဘက်​ရည်​ဆိုင်​ ( ည​နေ ၃ နာရီ​နောက်​ပိုင်းက​နေ မနက်​ မိုးအလင်း ဖွင့်​တာ )
၄။ ၃၅ လမ်း​ပေါ်ကပဲ ၇၆ လမ်းနဲ့တူရဲ့ ကီးမား ပလာတာ နဲ့နာမယ်​ကြီးတဲ့ “ကီးမားတင်​၀င်း”
၅ ။လမ်း၈၀ ၃၅×၃၆ ကြားက စိမ်းလဲ့မြိုင်​ အမျိုးသမီး ​ဘော်​ဒါ လား( ​နောက်​ The Sea တည်းခိုခန်းဖြစ်​သွားတာ ) အဲ့​ဘော်​ဒါနဲ့ မျက်​​စောင်းထိုး​လောက်​က ” ပန်းသခင်​ ” လက်​ဘက်​ရည်​ဆိုင်​ ”
၆။ အထက ၂၂ နဲ့ မျက်​​စောင်းထိုးက “စမ်းသီတာ ” လက်​ဘက်​ရည်​ဆိုင်​
၇။ ၃၃လမ်း ၈၀×၈၁ လမ်း​ပေါ်က “​ရွှေနိုင်​ငံ ”
၈ ။၈၄လမ်း ၃၄×၃၅ ကြားက ၀င်းလိုက်​ ရုပ်​ရှင်​ရုံလား အဲ့​ဘေးက “မုတ်​ဆိတ်​ ” လက်​ဘက်​​ရည်​ဆိုင်​
၉။ ၄၁လမ်း ၈၅× ၈၆ လမ်းကြားက ” သဇင်​ ” လက်​ဘက်​ရည်​ဆိုင်​
၁၀။ ၂၆ ဘီလမ်း​ပေါ်က ” Shell ” လက်​ဘက်​ရည်​ဆိုင်​
၁၁။ ​ဆေးတက္ကသိုလ်​ နား​လေးက ” ​ခေါတ်​​ကျောင်းသား လက်​ဘက်​ရည်​ဆိုင်​နဲ့ ပုဂံ အလှ လက်​ဘက်​ရည်​ဆိုင်​
၁၂။ ၈၁ လမ်း ၃၁ လမ်းလား ” မင်းမင်း​ကျော်​ ” လက်​ဘက်​ရည်​ဆိုင်​
၁၃။ ၇၃ လမ်း မိန်းဘက်​သွား​တော့ ​ရေနီ​မြောင်း မ​ရောက်​ခင်​​လေးမှာ အ​ရှေ့က်​​ဘေးက ” သီတာ​အေး ” လက်​ဘက်​ရည်​ဆိုင်​ အဲ့သီတာ​အေး လွန်​လာ​တော့ ​ရေနီ​မြောင်းနဲ့ ကပ်​ပြီး ဖွင့်​ထားတဲ့ “ဟိုးဟိုး​ကျော်​ ” လက်​ဘက်​ရည်​ဆိုင်​
​ဗောဓိကုန်းလမ်းထဲဝင်​​တော့ “​ရွှေစည်​​တော်​” တို့ ” ​ရွှေနိုင်​ငံ ” တို့ သုံး​လေးဆိုင်​ရှိ​သေးရဲ့နာမယ်​ မမှတ်​မိ​တော့ ။
၁၄ ။ ဘဏ်​ ၃ ရဲ့ အ​ရှေ့ဘက်​နား​လေးမှာ အလုပ်​သမား သက်​သာဆိုင်​ဆိုတာရှိ​ရဲ့ ။ တုံကင်​နဲ့ တစ်​ခါတည်း ​သောက်​ချင်​တာ စားချင်​တာ ၀ယ်​ရတာ ။ လက်​ဘက်​ရည်​က ပြား​ခြောက်​ဆယ်​ ဆမူဆာက တစ်​မတ်​ အဲ့ဒါ​တော့မှတ်​မိတယ်​ ။ ​အော်​ ​မေ့​တော့မလို့
၁၅။ ၃၅ လမ်း ၈၂​ဒေါင့်​မှာ “ချိန်​တန်​ပြီ ” လက်​ဘက်​ရည်​ဆိုင်​ အဲ့ အ​နောက်​ဖက်​ကပ်​ရက်​က “ရှမ်းမင်းသား ” လက်​ဘက်​ရည်​ဆိုင်​ အဲ့ ရှမ်းမင်းသားက ၀က်​သား​ပေါင်းနဲ့ ​ပေါက်​ဆီ နာမယ်​ကြီးတယ်​ ။ ​
​ကော်​မန့်​ ​ရေး​နေတုန်း ​ခေါင်းထဲ​ပေါ်လာတာ ချ​ရေးလိုက်​တာ ။ အဲ့ လက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်​​တွေထဲက ဘယ်​နှစ်​ဆိုင်​​လောက်​ လက်​ရှိကျန်​​နေ​သေးလဲ​တော့​တော့ အမြဲ​နေတဲ့သူ​တွေသာ သိ​ပေ​တော့မယ်​ ။
PS ဆိုင်​နာမယ်​မမှတ်​မိလို့ မိန်းလမ်း​ပေါ်က BSc ကွမ်းယာဆိုင်​နားမှာလည်း လက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်​တစ်​ဆိုင်​ရှိ​သေး ။
မိန်း နားက ရွှေပြည်မိုးတို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် နာမည်ကြီးတွေလည်း အများကြီးးး
ဥနီလည်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင် သရဲလားး
မန်း​လေးမှာ ​ကျောင်းတက်​တုန်းက သူငယ်​ချင်းတစ်​​ယောက်​ရှိခဲ့ဖူးတယ်​ ။
ဆက်​မ​ရေး​တောဘူး​အေ …. ။ သူ့အ​ကြောင်း​ရေးရရင်​ ပို့တစ်​ခုစာမက ဒါ​ကြောင့်​ ​ဘေလ်​​လေးရှိတုန်း ညမှ အဲ့​ခေါင်းစဉ်​နဲ့ ပို့စ်​​ရေးမယ်​ ။
ကိုညီထွဋ်သီချင်းနားထောင်ခဲ့ဖူးတဲ့… တောင်ကြီးက စမ်းသီတာဆိုတဲ့လဘက်ရည်ဆိုင်လေးသတိရမိပါရဲ့…
အခုတော့ ကျစိမ့်တခွက်နဲ့ လက်ကီစထွိုက်တဗူးအဖြစ်ပြောင်းသွားပြီ…
စိတ်ပြတ်တာ မပြတ်တာနဲ့ ဆိုင်လားလို့။
ငါ ဟိုနေ့က ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစားထိုး တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေ ကြည့်မိတယ်။
အမေမွေးတုန်းက ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ အကောင်းလေးတွေ နော်။
ပျက်စီးအောင် အရက်သောက် ဆေးလိပ်သောက်နဲ့။
ယိုယွင်းလာရင် အစားထိုး ကုသဖို့ ဈေးကြီးပေးဝယ်ကြနဲ့။